Isakhiwo samathuluzi wokukhiqiza - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
We Jera fibre has siqu isikhunta design yethu, isikhunta ekwenziweni futhi isikhunta processing workshop
Ukubumba ibhulokhi eligutshuliwe eligcwele uketshezi noma into ephendulekayo efana nepulasitiki, ingilazi, insimbi noma impahla eluhlaza ka-ceramic. Isikhunta singumlingani wozenzele. Njengomkhiqizi, kulula ukuba ne-workshop yabo yokubumba, ukuze balungise futhi bahlanganise isikhunta sensimbi ngokushesha bese besiza imigqa yokukhiqiza kahle.
Ngo udini workshop, ngokuvamile senza ingxenye isikhunta imikhiqizo:
-Plastic isikhunta imikhiqizo injected
-Press Ukwakha imikhiqizo
Imikhiqizo -Aluminium die ekubunjweni
-Zinc die imikhiqizo thusi
Izintambo ezakhiwe ngocingo
Ngale workshop yokubumba, i-jera iyakwazi ukucwaninga nokuthuthukisa imikhiqizo emisha noma ukukhiqiza ibanga lomkhiqizo elenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Futhi imboni yethu ingancintisana kakhulu, futhi ikwazi ukunikeza amaklayenti ethu intengo yokuncintisana nemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Inhloso yethu ukukhiqiza nokunikezela ngemikhiqizo ephelele futhi enokwethenjelwa kumakhasimende ethu ekwakheni inethiwekhi yezokuxhumana kanye nezinhlelo zokusabalalisa amandla. Sakha yonke imikhiqizo ehlobene namakhasimende ethu ekwakheni inethiwekhi yezokuxhumana kanye nezinhlelo zokusabalalisa amandla. Uma unezidingo zemikhiqizo ehlobene, vele ukhululeke ukuthumela i-imeyili noma usishayele.